डीपफेक 'भूत परिवार' तपाइँको सबै स्वतन्त्रता र परिचय 'विचार पुलिस' (भाग 3) हटाउन को लागी PsyOp: मार्टिन Vrijland
भूत परिवार, भूत बुबा, भूत छोरा। भूत प्रेत चाँडै भूत बगैचामा फेला पर्नेछ, किनकि भूतको कथा उत्साहजनक र "विश्वसनीय" रहिरहनुपर्दछ। साइकोपले जर्ज ओर्वेलको चिन्ता पुलिस प्रस्तुत गर्दै छ र कुनै खोज वारन्ट बिना हरेक अगाडि ढोका पछाडि हेर्न सक्षम हुन। कथा तपाईको दिमागमा हरेक दिन डि टेलिग्राफ द्वारा राखिन्छ; '40 /' 45 मा रेडहरू गर्ने कुरालाई समर्थन गर्ने अखबारले पनि। र त्यो छाप कानून आज फेरि आउँदैछ।
छापा कानून चाँडै आउँदैछ कि पहिलो समयमा स्पष्ट भयो प्याक प्रसारण यस भूत कथा को बारे मा। डिप्टी पुलिस प्रमुख (लि unknown्ग अज्ञात) जेनी नोलले मलाई भने कि पुलिस पहिले भूत फार्ममा गएको थियो किनकि त्यहाँ झारपात रोपेको शंका थियो। तर, उनले भने, पुलिसले भित्र हेरी सकेन, किनभने भूत बुबाले उनीहरूलाई भित्र जान दिनुहुन्न। तपाईंलाई पहिले नै थाहा छ कि यहाँ नयाँ कानुनमा काम भइरहेको छ जुन अगाडि ढोका पछाडि हेर्न बाधा हटाउनु पर्छ, त्यसैले हामी वर्तमान समयमा पनि छापाका लागि ठाउँ सिर्जना गर्नेछौं। राउन्ड-अपहरू जसले विचलित विचारहरूको घोषणा गर्ने सबैलाई लिन सकिन्छ।
"अह, भ्रिजल्याण्ड, के तपाई अब अलि टाढा जानुहुन्छ? के तपाई अलिक पागल हुनुहुन्न?"के तपाईंले मिडिया रिपोर्टहरूको बारेमा पनि यही प्रश्न सोध्नुभएको छ? के तपाईं कहिल्यै राम्रो भुक्तानी धारणा ब्यबश्थकहरू र उनीहरूको राम्रो सशुल्क भुक्तानी गरिएको हो, हो, तालिका पाहुनाहरूलाई होच्याउँदै; प्रकारको जेरोइन पाउ? "खैर, कहिलेकाँही तीनिहरू निकै आलोचनात्मक हुन्छन्!"हो, ती दिशातिर कार्य गर्दछन् जसले तपाईंलाई ठूलो झूटबाट टाढा राख्दछ र आधारभूत कथा जारी राख्दछ। के तपाईंले अहिलेसम्म महसुस गर्नुभएको छैन? यो सम्पूर्ण कथा सायद मनोवैज्ञानिक अपरेसन (PsyOp) भन्दा बढि केहि छैन, जस्तै भाग 1, भाग2en भाग3मेरो लेखहरु को। तपाईं ती लेखहरू पढ्नुभयो भने यो राम्रो हुनेछ र सेयरहरू, ताकि कसैले पनि भन्न नसक्ने:Wir haben es cucin wish"।
स्पूकी छोरा जान, तपाइँलाई थाहा छ बुबाले "स्वतन्त्रताको गैरकानूनी हनन" को बारे मा ठूलो खतरा जगाउन5बियर खोलाउने छोराले अब LGBTI एजेन्डालाई नक्शामा राख्ने भूमिका खेल्छ। किनभने हामीसँग तत्काल एउटा महत्त्वपूर्ण विषयहरू छन्, जसको लागि राज्यले तपाईंलाई पछि प्रदान गर्दछ मनोविज्ञान अवलोकनको लागि सेलमा फ्याँक्न सक्छ। उदाहरण को लागी, यदि तपाइँ प्राथमिक स्कूलहरु मा LGBTI प्रचार को बारे मा कुनै आपत्ति है, अब बाट तपाइँ भूत कथा बाट भूत बुबा संग जोडिएको हुनेछ। जे भए पनि, उनले आफ्ना बच्चाहरूलाई स्कूल बाहिर लगे र उनी एक पुरुष-महिला सम्बन्धको लागि थिए। यो उहाँको सुन्दर डीप फाक भिडियोहरूबाट स्पष्ट हुन्छ, De Telegraaf अनुसार:
जेरिट जान भ्यान डीको उपदेशहरूबाट यो स्पष्ट हुन्छ कि उसको दृष्टिकोण स्वस्थ सम्बन्धको बारे के हो। परमेश्वरको आदेश अनुसार पुरुषले एक महिलासंग सम्बन्ध राख्नुपर्दछ। यदि तपाईंले त्यसो गर्नुभएन भने, त्यसोभए तपाईं 'फोहोर माया' मा हुनुहुन्छ भने, त्यसो भए तपाईं आध्यात्मिक रूपमा आफ्नो खुट्टामा 'सीवेज पानी' मा उभिनुहुन्छ, भ्यान डी आफ्नो एक उपदेशमा भन्छन्।
यो धेरै चलाख र परिष्कृत प्रोग्रामिंग हो जुन हामी साक्षी छौं। फादर गेरिट जान (जो 'भूत पिता' हुन्) का 'भूत दृष्टिकोण' रहेको छ र सम्भवतः समलि against्गीको बिरूद्ध केही छ। र त्यो पाठ्यक्रम छोरा जनाको लागि ट्रिगर थियो, जसले क्यानाडा भाग्ने सपना देखे (वा ऊ पहिले नै त्यहाँ भएको थियो, त्यो स्पष्ट छैन, किनकि केहि पनि स्पष्ट छैन)। साइकोप छवि स्केच गरीएको छ कि बुबाले बच्चाहरूलाई हेटेरोनॉर्मेटिभली हुर्काउन र भूत छोरा जान समलि .्गीलाई दिन चाहान्छन्। जान बुबा "जोन ईगल" को शासनबाट भाग्न चाहन्थे, त्यो छवि हो। ऊ रुनेरवोल्डमा बार्टेन्डरको पनि प्रेममा परेको हुन सक्छ। त्यो राम्रो बारटेन्डर जसले उसलाई पुलिस कल गर्न मद्दत गर्‍यो।
जर्ज ओर्वेलको चिन्तित पुलिसको परिचयका लागि मानिसहरूलाई तयार राखिएको हो। केही डच मानिसहरु यसको बिरूद्ध हुनेछन्। वास्तवमा, धेरैले यसलाई राम्रो तरीकाले पत्ता लगाउँदछन् कि विवेकशील विचार भएका मानिसहरूले उदाहरणका लागि heteronormativity (सामान्य रूपमा हेटेरोसेक्सुअल) दृश्य भनेको पुन: शिक्षा शिविरमा बन्द छ (GGZ केयर प्रावधान)। र यसको लागि यो एकदम सजिलो छ कि पुलिसलाई अब सर्च वारन्टको आवश्यक पर्दैन, तर मात्र भित्र आउन सक्छ। बुबा गेरिट जानले कथित रूपमा आफ्ना बच्चाहरूलाई गृह स्कूल समूहबाट ल्याए किनभने तिनीहरू राज्यका नियमहरू पछ्याइरहेका थिए। यसले सम्भवत: इ .्गित गर्दछ कि उनका बच्चाहरूलाई एलजीबीटीआई सामान्यता सिकाइएको थियो र उहाँ यससँग सहमत हुनुहुन्न। त्यसोभए यदि भविष्यमा तपाईंलाई यो अनुपयुक्त लाग्दछ कि प्राथमिक स्कूलमा तपाईंका बच्चाहरूले ड्र्याग क्वीन सुन्नु पर्छ जसले उनीहरूलाई भन्छन कि उनीहरू केटा वा केटी होइनन्, तर तिनीहरूले अझै पनि उनीहरूको लि choose्ग छनौट गर्न सक्दछन् र तपाईं त्यस बारेमा केही भन्नुहुन्छ, तब तपाईं हुनुहुन्छ एक सम्भावित असन्तुष्टि यो भूत परिवार PsyOp ले पहिले नै हेरचाह गर्यो।
त्यसकारण हामी रेड कानूनको तयारी देख्दछौं, तर यो अब भनिएको छैन र एक मनोवैज्ञानिक शल्यक्रियाको माध्यमबाट मानिसहरूलाई स्वीकार्य मोडमा ल्याइएको हुनाले कसैले पनि यो सोच्ने पुलिसको परिचय र यसको छापा मार्ने विधिहरूको विरोध गर्दैन।
हल्याण्डको सोच विचार गर्दै, मैले ठूला नदीहरू अनन्त तल्लो भूमिबाट बिस्तारै हिंडिरहेको देख्छु, अकल्पनीय विरस पप्प्लरका पows्क्तिहरू अन्तमा अग्लो प्वाँखहरू जस्तै उभिरहेका हुन्छन्; र देशभरि छरिएर रहेका विशाल अन्तरिक्षमा डुब्ने फार्महरू, रूख समूहहरू, गाउँहरू, काटिएका टावरहरू, गिर्जाघरहरू र एल्कम्सको भव्य सन्दर्भमा। हावा तल झर्छ र सूर्य बिस्तारै ग्रे रंगको बाष्पयुक्त वाष्पमा धुम्रपान गरिन्छ, र सबै क्षेत्रहरूमा टेलिग्राफको आवाज अँगालेको छ र आलोचना बिना सुनेको छ।
स्रोत लिङ्क सूची: npostart.nl, assercourant.nl
ट्याग: 1984, मृत्यु, ईगल, विशेष, सोचे प्रहरी, पुलिस लाग्यो, जर्ज, फेला पर्यो, जेनी नोल, यूहन्ना, सञ्चालन, Orwell, मनोवैज्ञानिक, psyop, छापे, छापा, razzia0 विधान, छापा कानून, रुइनरवोल्ड, भूत परिवार, भूत आमा, भूत बुबा, भूत छोरा, छुटेको छ
23 अक्टोबर 2019 मा 22: 36
अनौठो र डरलाग्दो सन्दर्भमा
एक तथाकथित डबल हत्या वरिपरि अनौठो रहस्य? एक संदिग्ध पक्राऊ भएकोले
किनभने डाइमेनको मार्टिन लुथर किंगलेनमा दुई निर्जीव लास भेट्टाउँदा।
तार्किक प्रश्न के हो, किन तिनीहरू कसले र कसरी फेला पारे? , सबै अज्ञात, डरलाग्दो, प्रेतवाधित घर दृश्यहरूमा रहन्छ।
यो साबुनको चार अध्याय जस्तो देखिन्छ, NL सानो छ।
संदिग्ध व्यक्तिले ढोका meer र अधिक कहिल्यै खोलेको छैन र किन त्यहाँ कुनै एम्बुलेन्सहरू थिएन, सबै त्यहाँ पछि दुई थिए !!! मृतकलाई पश्चाताप गर्न, पुन: जीवित र दर्जनौं प्रश्नहरू ...
24 अक्टोबर 2019 मा 21: 42
अह, हो यो फेरि Telegraaf मा एक नयाँ सन्देश को लागी आएको थियो .. के तिनीहरूले मेरो फेसबुक टाइमलाइनमा नजर राख्छन्?
लिपि राम्रो सँगै राखिएको छ:
(गुगल क्रोम ब्राउजरको इन्कग्निटो मोडमा पढ्न स्वतन्त्र)
मलाई विश्वास छ कि नेदरल्याण्ड्सको आधा चर्चले स्वर्गदूतहरु र प्रेतहरूमा विश्वास गर्दछन्। वास्तवमा, संसारका अरबौं मानिसहरु स्वर्गदूतहरु, प्रेतहरु वा जिनहरु (इस्लाम अनुसार) मा विश्वास गर्छन्।
त्यसले भन्यो कि हामी अर्को पाउ प्रसारणको लागि पर्खिरहेका छौं जहाँ एक पंथ विज्ञले वर्णन गर्नेछन् जोन ईगलको विचारहरू कती अपवाद थिए।
यस कथामा पिटर आर कहाँ छन्? ओह, हो, त्यो पक्कै भनिन्छ यदि डीएनए जाँच भूत आमा पाउन को लागी गरिनु पर्छ! (तर लिपिको अनुक्रम कस्तो देखिन्छ भन्ने बारेमा केवल एक विचार हो)
28 अक्टोबर 2019 मा 13: 39
यस वेबसाइटमा भर्खरका लेखहरू पढेपछि मेरो एउटा निष्कर्ष:
हामीले यो कुरा सबैलाई थाहा पाउनुपर्दछ कि, अन्य चीजहरूको साथमा, निम्न अधिकारहरू हामीबाट हरण गरिएको छैन, किनकि यी अधिकारहरू व्यक्ति र संस्थाहरूबाट जहिले पनि खतरामा पर्दछन् जसले बढी शक्ति र शक्ति खोजिरहेका छन्:
- अदालतको आदेश बिना घर खोज अस्वीकार गर्ने अधिकार
- घर शिक्षा विकल्पको अधिकार (सम्भवतः केहि गुणस्तरको सर्तहरूमा)
- खोप अस्वीकार गर्न सही
- आत्म-रक्षाको अधिकार
- अफिसमा फिल्म अधिकारीहरूको अधिकार जबसम्म तपाईं उनीहरूका काममा तिनीहरूलाई परेशान गर्नुहुन्न
28 अक्टोबर 2019 मा 13: 48
तर सबै भन्दा माथि: "तपाइँ के चाहानुहुन्छ" सोच्ने अधिकार
विचार पुलिस को परिचय।
सम्झनुहोस्, त्यो मानिस "प्रेतहरू" मा विश्वास गर्थ्यो। लगभग5अरब व्यक्ति विश्वमा त्यसो गर्छन्। एन्जिलहरू एन्जिलहरू र राक्षसहरू, मुस्लिमहरू र ईभान्जेलिकल इसाईहरू विश्वास गर्छन् कि परमेश्वरले पवित्र आत्मालाई पेन्टेकोस्टमा पठाउनुभयो। यसैले हामीसँग एक व्हिट्सन छुट्टी छ।
28 अक्टोबर 2019 मा 15: 31
थप गरेकोमा धन्यवाद, यो सँधै तल झर्दछ।
प्रत्येक व्यक्तिलाई आफूले चाहेको कुरा सोच्न / विश्वास गर्ने अधिकार छ, साथै त्यो अनुसार काम गर्ने अधिकार पनि हैन, जबसम्म यो अरूको अधिकार र स्वतन्त्रताको हनन गर्दैन।
नैतिकताको तर्क मानिसहरुलाई सोच्न को लागी गाह्रो छैन, र तपाईले विवरणहरुमा एक अर्का संग सहमत हुनुपर्दैन।
28 अक्टोबर 2019 मा 15: 42
र केवल समाचार आईटमको बारेमा मात्र, यो वास्तवमै हास्यास्पद हो कि कभरेज कति ठूलो छ / विस्तृत छ, र यसले वास्तवमा अन्तर्निहित अभिप्रायलाई जनाउँछ। यो अभिप्राय साँझको घण्टामा धेरै काम गर्ने मानिसहरूलाई मनोरन्जन गर्ने हो, वा कानूनमा परिवर्तन गर्न प्रोत्साहित गर्ने हो, कुनै विचार होईन। तथ्य रहिरहन्छ कि हामीले हाम्रा अधिकारहरूको रक्षा गर्नुपर्दछ र तपाईं यसको लागि बहस गर्दै हुनुहुन्छ, मलाई लाग्छ कि यो राम्रो चीज हो।
28 अक्टोबर 2019 मा 21: 24
हेर, यो समाधान भएको छ, यो त्यस्तो कडा मान्छेहरू भएको हुनुपर्दैन। केवल बाहिर निकाल्नुहोस् र परीक्षण गर्नुहोस् ...।
29 अक्टोबर 2019 मा 10: 51
विशेष घटनाहरू पछि। आजकल, एनी फेबर केस पछि न्यायाधीशले मनोवैज्ञानिकको रूपमा दोहोरो भूमिका पनि पाएका छन्। वाणिज्य कम्पनीहरू अब पुलिसको रूपमा एक दोहोरो भूमिका तोकिदिएका छन् ...
1 नोभेम्बर 2019 मा 23: 49
मदर भ्यान रुइनरवल्डलाई गाडिएको छैन, तर टेलिग्राफका अनुसार मार्फत गोप्य रूपमा दाहसंस्कार गरियो
दाहसंस्कारले एउटा विशेष फाईल रिलीज गर्यो, हामीले त्यहाँ फेरि के गर्नुपर्छ?
द्वारा आमालाई गाडिएको छैन, तर टेलिग्राफको क्रिस्टल बलका अनुसार।
बगैंचामा गाडिएको छैन तर तथाकथित "विशेष फाईल" को साथ दाहसंस्कार गरियो।
हामीलाई विवरणहरू बाहिर निकाल्न अनुमति छैन, तर?
2 नोभेम्बर 2019 मा 13: 58
जीवनप्रति इसाई दृष्टिकोण भएका व्यक्तिहरू प्रायः 'पुन: पूर्वेक्षण' मा विश्वासको कारण दाह संस्कार गर्दैनन्।
तर तिनीहरूले यसको साथ पढे, त्यसैले यो अर्को स्पिनको लागि पर्खिरहेको छ।
« डीपफेक 'भूत परिवार' तपाइँको सबै स्वतन्त्रता र परिचय 'दिमाग पुलिस' (भाग 2) हटाउन को लागी PsyOp
झूटा झण्डा आतंकवादीहरूले 23 र 24 अक्टुबरमा लन्डन, म्यानचेस्टर, पेरिस, बार्सिलोना र रोटरडमलाई आक्रमण गर्छन्? (अद्यावधिक) »
कुल भ्रमण: 14.056.982
Mindsupply op निक्की वर्स्टापेन जोस ब्रेच तपाईंको डीएनए अनलाइनमा टिंकरिंगको लागि डीएनए डाटाबेस स्वीकार गर्ने बारेमा छ